किन ! लोग्नेमान्छे रुनु हुन्न ?-Nagarikaawaj.com
किन ! लोग्नेमान्छे रुनु हुन्न ?
‘लोग्नेमान्छे भएर रुनुहुन्न रे, मर्दको छोरोले आँसु झार्नहुन्न रे….’ योगेश्वर अमात्यको स्वर रहेको यो गीत नसुन्ने सायदै होलान् । लोग्नेमान्छेले साँच्चै रुनुहुन्न त ? लोग्नेमान्छेलाई दुःख पर्दा वा पीडामा मन हलुङ्गो बनाउनका लागि रुन बन्देज छ त ? हाम्रो समाज अनि यसको रिवाज सुन्दा, भोग्दा संस्कार र संस्कृति जिन्दगीका लागि होइन, यिनीहरूका लागि जिन्दगी बाँचिदिएको आभास हुन्छ । यो कस्तो रिवाज अनि सोचाइ होला ? उही प्रशव पीडाबाट जन्मिएका मानिसमा पनि किन यति धेरै फरक व्यवहार ? केही शारीरिक संरचनाहरूबाहेक खासै भिन्नता नरहेको लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छेमा यति धेरै फरक किन होला ? महिलामा विवाद भयो भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । धर्मग्रन्थदेखि दैनिक जीवन चलाउने धेरै कुरामा भिन्नता पनि छ । यो महिलाको काम, यो पुरुषको काम भनी भागबन्डा गरिएको छ । हुन त प्राकृतिक हिसाबले पनि दुईमा केही भिन्नता त अवश्य छन् नै, तर ती भिन्नता त संस्ाार सृष्टिका दृष्टिले आवश्यक पनि हुन् । प्राकृतिक भिन्न्ता यसरी छुट्याइएका छन् कि जसलाई जे जिम्मा दिइएको छ, त्यो अर्कोले गर्न सक्दैन । तर मानिसले प्रकृतिको नियमलाई पछ्याउन जुन जमर्को गरेको छ, त्यसमा तात्त्विकता देखिँदैन । जुन काम दुवैले गर्न सक्छन्, त्यसमा पनि अंकुश लगाइएको छ । देखासिखीमा नै धेरैले आफ्नो जिन्दगी खतम पारेका छन् । जन्मने, मर्ने अनि ज्युने तरिका समान छन्, तर गर्ने र भोग्ने व्यवहार फरक बनाइएको छ ।
महिलालाई जहाँ जुन परिस्थितिमा पनि रुन छुट छ, तर पुरुषहरू अरुको सामु आफैंभित्र भएको आँसु निकाल्न पनि हिम्मत गर्दैनन् । यो पनि त एक किसिमको भिन्नता नै होला नि ।
हुन त अरुको दुःख तराई लागे पनि आफ्नो
दुःख सबैलाई पहाड नै लाग्छ । महिलाले पुरुषको काम सानो वा सजिलो देखे पनि र पुरुषले महिलाका काम सजिलो देखे पनि वास्तवमा दुवैको काम र बाध्यता अनि गरिने संघर्ष कठिन नै छ । एकअर्कालाई बुझेर अघि बढे बाटो साफ र सजिलो हुन्छ ।
हुन त महिला-पुरुषको समान सहभागिताको बहस चलेको धेरै भैसकेको छ । महिला पुरुषभन्दा हरेक कुरामा पछाडि परेको विषयलाई उठाइएको छ । तर समग्र रूपमा हेर्दा के लोग्नेमान्छेलाई चाहिँ यो समाजमा ज्युन सजिलो होला त ? पुरुषप्रधान समाज छोरा जन्मेकै दिनबाट बाबुको सम्पत्तिको अधिकारी मानिन्छ । बिडो थाम्ने भनिन्छ । साथै जन्मेकै दिनबाट उसमा जिम्मेवारीको साथमा बोझ पनि त थपिन्छ । उसको नाता सम्बन्धमा भएका सबैको जिम्मेवारी उसले लिनुपर्छ । बाबुआमा भन्छन्, ए छोरा तैंले धेरै पढेर हाम्लाई पाल्नुपर्छ, दिदीबहिनी हुर्कंदैछन्, तिनीहरूको ख्याल राख्नुपर्छ । गाउँ-समाजमा असल छोरा भनेर चिनिनुपर्छ । विवाह हुन्छ, श्रीमतीको हरेक सपना उसैले पुरा गर्नुपर्छ । छोराछोरी जन्मन्छन्, उनीहरूलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन अनि हरेक सपना पूरा गर्न उसले दिनरात काम गर्नुपर्छ । अलिकति केही कमी भएमा तँ लोग्नेमान्छे होस्, तैंले नै सबै जिम्मेवारी निर्भाह गर्नुपर्छ, भनिन्छ । ऊ बुझ्ने भएदेखि नै उसमा यस्तै किसिमका जिम्मेवारी थपिन्छन् ।
श्रीमतीको साडी, चुरादेखि छोराछोरीको फि, नुनदेखि सुनसम्मको सामान जुटाउने पुरुषकै जिम्मेवारी हुन्छ । नमरुन्जेलसम्म नै आफू लगायत परिवारका सदस्यको जिम्मेवारी पुरुषकै काँधमा हुन्छ । जिन्दगी चलाउनका लागि त जसरी सहज हुन्छ, त्यसरी नै चल्नुपर्ने हो । तर यहाँ काम, जिम्मेवारी सबै बाँडफाँड गरी जिन्दगीलाई बोझ बनाइएको छ । दुवैले गर्न सक्ने काम पनि यो त उसको काम हो भनेर पन्छिन्छांै । के परिवारको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पुरुषकै मात्र हो त ? हामी महिला हक चाहियो भन्दै नाराबाजी गर्छौं, तर पुरुषले भोगेका पीडालाई नजरअन्दाज गरिरहेका त छैनौं ? बाहिरबाट कमाउने, रासनपानी थुपार्ने, सबै परिवारका सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पुरुषको ।
तर जब महिला कमाउँछे, उसले आफ्नालागि साडी, गहना कुनै अन्य सामान किन्छे । महिलाहरू भन्ने गर्छन्- आफूले कमाएको मेरो आफ्नो हो र लोग्नेले कमाएको हाम्रो कमाइ हो । यसरी एक्ला-एक्लै संघर्ष गर्ने हो भने कहिलेसम्म चल्ने ?
लोग्नेमान्छेको औसत आयु स्वास्नीमान्छेको तुलनामा किन कम हुन्छ ? कारण यही हो कि ऊ नमरुन्जेलसम्मै हरेक किसिमको बोझले थिचिएको हुन्छ । उसले कहिल्यै आरामको महसुस नै गर्न पाउँदैन । उसको दिमागमा यही भरिएको हुन्छ कि मैले सकिनसकी पनि पढ्नैछ, कमाउनैपर्छ, सबैलाई खुसी राख्नैपर्छ ।